Nchịkọta na Ule | Martech Zone
Nchịkọta, nleba anya, njikere na akara akara, nnwale a/b, ngwaahịa nnwale dị iche iche, ngwọta, ngwaọrụ, ọrụ, atụmatụ, na omume kacha mma maka azụmaahịa sitere n'aka ndị dere akwụkwọ Martech Zone.
Otu esi ahọrọ Framework Maka ndị na-azụta gị
Onye na-azụ ihe bụ ihe mejupụtara nke na-enye gị nkọwa zuru oke nke ndị na-ege gị ntị site na ijikọta ozi igwe mmadụ na akparamaagwa na nghọta wee gosi ya n'ụzọ dị mfe nghọta. Site n'echiche bara uru, ndị na-azụ ahịa na-enyere gị aka ịhazi ihe ndị ka mkpa, kenye ihe onwunwe, kpughee oghere ma mee ka ohere ọhụrụ pụta ìhè, mana ihe dị mkpa karịa nke ahụ bụ ụzọ ha si enweta onye ọ bụla n'ahịa, ahịa, ọdịnaya, imewe na mmepe n'otu ibe.
Ị sorola nnukwu ụlọ ọrụ n'ịntanetị naanị ka ị nwee nkụda mmụọ maka ọdịdị ọdịnaya ha na-ekerịta ma ọ bụ enweghị njikọ aka ha na ndị na-ege ha ntị nwere? Ọ bụ akara ngosi, dịka ọmụmaatụ, ịhụ ụlọ ọrụ nwere iri puku kwuru iri puku ndị ọrụ yana naanị òkè ole na ole ma ọ bụ mmasị na ọdịnaya ha. Ọ bụ ihe na-egosi na ha anaghị ege ntị ma ọ bụ na-anya isi maka ọdịnaya ha na-akwalite. Ngwa nke social media
Vendasta: Jiri Platform na-acha ọcha ngwụcha-na-ọgwụgwụ tụọ ụlọ ọrụ ịre ahịa dijitalụ gị
Tọzdee, Eprel 14, 2022 Tọzdee, Eprel 14, 2022 Douglas Karr
Ma ị bụ ụlọ ọrụ mmalite ma ọ bụ ụlọ ọrụ dijitalụ tozuru okè, ịmegharị ụlọ ọrụ gị nwere ike bụrụ ihe ịma aka. Enwere naanị ụzọ ole na ole iji tụọ ụlọ ọrụ dijitalụ: Nweta ndị ahịa ọhụrụ - Ị ga-etinye ego n'ahịa na ịzụ ahịa iji ruo atụmanya ọhụrụ, yana were talent dị mkpa iji mezuo njikọ ndị ahụ. Nye ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ - Ịkwesịrị ịgbasa onyinye gị iji dọta ndị ahịa ọhụrụ ma ọ bụ mụbaa
Omume 6 kacha mma maka ịbawanye nlọghachi na itinye ego (ROI) nke ahịa email gị
Monday, April 4, 2022 Monday, April 4, 2022 Vladislav Podolyako
Mgbe ị na-achọ ọwa ahịa nke nwere nloghachi na-akwụsi ike na nke a ga-ebu amụma na itinye ego, ị naghị ele anya karịa ahịa email. Ewezuga ịbụ ezigbo njikwa, ọ na-enyeghachi gị $42 maka $1 ọ bụla emefuru na mkpọsa. Nke a pụtara na ROI gbakọọ nke ahịa email nwere ike iru opekata mpe 4200%. Na blọọgụ a, anyị ga-enyere gị aka ịghọta ka ROI ahịa email gị si arụ ọrụ - yana otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ngwa mgbakwunye ọkacha mmasị maka saịtị WordPress azụmahịa
Wenezdee, Machị 30, 2022 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Nke a bụ ndepụta nke WordPress plugins m na-atụ aro maka ụlọ ọrụ iji bulie ma bulie saịtị WordPress ha na saịtị ntụgharị ntụgharị. M na-edobe ya ka ọ dị ka ọhụrụ plugins wepụtara.